Baarlamaanka Soomaaliya oo si deg deg ah ugu yeeray Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka – idalenews.com
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta si deg deg ah ugu yeeray Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka C/kariin Xuseen Guuleed, si uu ugu hor-yimaado, su’aalana wax looga weydiiyo meydad dhalinyaro ah oo wadooyinka Muqdisho la soo dhigay, kuwaasoo si xun loo dilay, markii lagala baxay Xabsi dowladda leedahay.
Gudi Xildhibaano ah oo dhowaan u saaray arrintaas Gudoonka Baarlamaanka ayaa maanta warbixino looga dhageystay kulankii baarlamaanka uu yeeshay, iyadoo dalbaday in Wasiirka Arrimaha gudaha iyo Amniga Qaranka uu hor-yimaado baarlamaanka.
Baarlamaanka ayaa sheegay in marka la soo gaba gabeeyo baaritaanada socda iyo dhageysiga warbixinta gudiga loo saaray ay qaadi doonaan tallaabo cadaalada lagu horkeenayo cidii ka dambeysay dambigaas.
Mudanayaasha Baarlamaanka ee ka hadlay kulanka maanta ayaa soo jeediyay in lala xisaabtamo hey’adaha ammaanka dowladda, isla markaana wax laga weydiiyo sababta dad xabsiga lagala baxo loo dilay, meydadkooda wadooyinka la soo waray.
Inkastoo Golaha Wasiirada ay kol hore gudi uu madax u yahay Wasiirka Arrimaha gudaha u saartay, hadana ma jirin ilaa iyo hada warbixin si rasmi ah uga soo saareen wixii uga soo baxay baaritaanka meydadka dadka wadooyinka la soo dhigay.
Bishii la soo dhaafay ayay aheyd meydadka dad gaaraya ilaa tobaneeyo ruux oo ay ku jireen dad xabsiyada lagala baxay la soo dhigay wadooyinka, kuwaasoo ay dilkooda ka dambeeyeen ciidamo ka tirsan dowladda.
Ra’iisiul Wasaaraha oo Maamulka KMG ah u magacaabay Gobolka Gedo iyo Ciidamada Ahlusuna oo la qarameeyay